Nhema dzePrometheus uye Pandora: Pfupiso Pfupi - UniProyecta
Iwo manhamba muFrench
Iwo manhamba muChirungu
Iwo manhamba muChinese
Iwo Mabhuku eTestamente Itsva eBhaibheri
Nhema yePrometheus naPandora
Prometheus inoonekwa sehunhu hunoshamisa mungano dzechiGiriki. Kunyange Aive wekuzvarwa titan wevatitan vanogara muchadenga Vasati vasvika vanamwari veOlympian, akarondedzera kwavari uye akaita mibatanidzwa nekugovana chiitiko chimwe chete. Pano iwe uchaona iyo ngano yegamba iri rinotungamira rudzi rwevanhu. Iwe uchazoziva vaive vabereki vavo, mabasa avo anoisa hupenyu hwavo panjodzi yekupa hunhu hunofa hwaingova avo vamwari uye hukama hwake neakakurumbira Pandora. Pasina zvimwe zvinokuita kuti umirire, tanga kuverenga inonakidza inonakidza ye Prometheus.
1 Ndivanaani vaive vabereki vaPrometheus?
2 Chii chaiita Prometheus?
3 Makore ePrometheus
4 Kurangwa kwaPrometheus
5 Prometheus naPandora
Ndivanaani vaive vabereki vaPrometheus?
Munguva yezera revamwari veOlympian, maTitans aivapowo uye Prometheus aive mumwe wavo. Akanga ari mwanakomana waJapetus uye nympini yegungwa inonzi Clymene.. Vakoma vake vaive: Epimetheus, Menecio naAtlas. Pakati pavo, Prometheus ainyanya kushinga, achikwanisa kupokana navanamwari zvisinei nekuti zviito izvi zvaizomukanganisa sei mberi.
Chii chaiita Prometheus?
Akanga ari mutariri wekusika vanhu, regai tione kuti kubatanidzwa kwake mune izvi kwakange kuri sei. Pakutanga, iye nemukoma wake Epimetheus vakapiwa basa rekusika mhuka nerudzi rwevanhu. Maitiro ekupawo zvese zvinodikanwa kuti vararame, zvese zviri zviviri mamiriro epanyama uye pekugara kwerumwe rudzi.
Epimetheus akatanga nekusika mhuka. Akazvigadzira zvemhando dzakasiyana uye akapa chimwe nechimwe hunhu hwakasiyana kubva kune mumwe. Sekureva kwengano, dzakasiyana siyana dzehupenyu dzaive chigadzirwa chekufungidzira kwechimiro ichi. Kana munhu aifanira kugadzira, akadana Prometheus, saka pakati pevaviri vavo vaigona kuita chinhu chikuru, chepakutanga.
Yaiva panguva iyoyo iyo Prometheus akafuridzirwa nekusikwa kwemunhu nehunyanzvi hwakasiyana nehwezvipfuyo. Akavaita kuti vafunge kuti vaigona kuzviriritira, nehungwaru uye nepfungwa muzviito zvavo. Hunhu hwavo hwepanyama hwaive hwakasiyana pamatanho avo, hunhu, uye ungwaru. Yaive nekwanisi yekuvaka mabasa avaida kuti vaite zviitiko zvavo.
Nenzira imwecheteyo, vaive nesimba pamusoro pemhuka dzekudzichengeta, sekugona kwavo kushanda ivhu maererano nezvirimwa, kudyara nekukohwa zvirimwa zvavo. Chimwe chinhu chakasarudzika icho Prometheus akapa kuvanhu yaive simba rekugadzira moto, chokwadi chakatsamwisa Zeus zvakanyanya nekuti ichi chaive chinongedzo chaienderana chete nevamwari. Izvi uye zvimwe zviito zvakamuendesa kutambura mutongo unotyisa.
Prometheus aive akashinga, ane hunyanzvi hunhu, akatsunga kunzvenga chero munhu akamira munzira yake kuti azadzise chinangwa chake chekubatsira vanhu. Haana kutya vamwari vekare veOlympus sezvo aive mumwe wemhando yepamusoro, aive titan, zvisikwa zvaigara mudenga zvisati zvauya kwevanamwari vechiGiriki. Aya hunhu hwemunhu uyu akawedzera hushingi hunodikanwa hwekuita magamba kune vanhu.
Yakadaro nyaya yekupa moto wevanhu. Zvakaitika apo Prometheus akakumbira Zeus kuti abvumire vanhu vake kuve nemoto, kuti vagone kuita mabasa mazhinji nekubika chikafu chavo. Zvisinei, Zeus akaramba kuzviita; izvo zvakatsamwisa zvikuru Prometheus, zvekuti mukutarisa kwamwari wezuva, inogona kutora murazvo unopfuta ndokuendesa kuvanhu vake vaanoda. Ichi chiito chakaratidza kutanga kwekutsiva kwamwari wevamwari kurwisa titan.
Senge izvo zvaive zvisina kukwana, nechinangwa chekupa chikafu chakanaka kune vanhu venyika, akaseka Zeus kechipiri nokumunyengerera nechipiriso chemombe. Izvi zvaive zvevamwari, nehungwaru Prometheus akazvipa kuvanhu kuti vagone kudya zvakapfuma pachiitiko ichocho. Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, mwari uyu akazivisa mutero wakakura kwazvo wechiGiriki kumutongo ane rupo, sechirango chekutadza kwake kusingaregererwi.
Zeus, akatsamwa nekushinga kwaPrometheus, pamusoro pazvo sekuseka kwevanamwari, akaraira Hephaestus naCratos kuti vamusunge ngetani nokusingaperi padombo riri pagomo reCaucasus. Ikoko aizove nekusingaperi pasina munhu anodambura ngetani.
Kusvikira rimwe zuva rakanaka, Hercules, uyo ari kupfuura nepakati penzvimbo achiperekedzwa neuta nemuseve, anoona iyo yakareba-mwoyo titan uye sarudza kuisunungura usina kufunga kaviri. Hapana mubvunzo kuti Prometheus aive nekutenda kusingaperi kuna Hercules nekumira kumusunungura.
Kamwe Prometheus paanosunungurwa kubva kurangwa kusingaperi, nyota yaZeus yekutsiva inoramba ichiwedzera. Ndiani aigona kufungidzira izvo zvaaizokwanisa kuita izere neruvengo rwakawanda nehuipi kurwisa titan nevanhu vese? Pfungwa dzakaipa zvakadaro chete ndidzo dzaigona kuronga Machiavellian kutsiva.
Akasangana nevamwe vanamwari vane simba uye saka vakarangana mukutsiva kwake kwakatevera. Ndeipi danho rako rinotevera raungave? Gadzira mukadzi akanaka kuti ape Prometheus, zita rake ainzi pandora. Akatakura nechipo chinouraya chaaifanira kusvitsa kwaari.
Hephaestus akatora chikamu mune izvi zvisikwa, uyo akatora ivhu uye akaita zvese zvikamu zvemuviri, Athena akamugadzirira mbatya dzese dzaaipfeka, ukuwo Hermes akazvitsaurira kumupa hukadzi nekutapira mukurapa kwake. Pakupedzisira, Zeus ndiye akamupa hupenyu uye akaita chipo chaaive nacho kuna Prometheus.
Paakagadzirira, Hermes akaenda naye kuna Prometheus. Ehezve, aiziva kuti paive nechakakanganisika navanamwari vane hasha ava. Kunyangwe aive ayambira hama yake nezve chirongwa chaZeus macabre, Epimetheus akapa kunaka kwake uye haana kukwanisa kuramba kumuroora.
Rimwe zuva rakaipa mukadzi akanaka akavhura chipo, bhokisi rakatakura nhamo dzese dzaizotambura nevanhu. Huipi hwakapararira nenyika yese pasina kana ani zvake akaponeswa kubva kwavari. Muizvi Pandora bhokisi yaivewo netariro, iyo isina kupunyuka pamwe nehuipi nenhamo, nekuti akaivhara isati yaenda.
Parizvino ngano yeaya mavara akakurumbira anotikurudzira zvakanyanya anozivikanwa. Prometheus aive muenzaniso wekupa kune vanhu. Akaramba chipo chaionekwa kwazvo nekuti aisavimba nevaya vaakange amupa uye, kunyangwe hazvo akayambira mukoma wake nezvazvo, haana kuteerera uye vese vakatambura zvakaipa.
Categories Ngano dzechiGiriki Kubatikiti kufamba
Iyo Pegasus Ngano
kudzidziswa » tsika nemagariro » Ngano dzechiGiriki » Nhema yePrometheus naPandora
Nhema yaAchilles uye Chitsitsinho
Leave mhinduro Misa mhinduro
zita Electronic tsamba dandemutande
UniProyecta ndeyako tsika uye kona yekudzidza mahara pa internet. Dzidza mitauro uye gutsa kuda kwako kuziva nezvinyorwa zvako uye zvidzidzo.
© 2021 UniProyecta